”Theo Walcott wuxuu jeclaan lahaa inuu ka dheelo Serie A” – Gool FM
”Theo Walcott wuxuu jeclaan lahaa inuu ka dheelo Serie A”
(Roma) 05 Jannaayo 2017 – Theo Walcott ayaa lala xiriirinayaa kooxaha AC Milan, Inter iyo Roma, waxaana arrintaa ka marag kacay wakiilka laacibka Arsenal oo laga soo qoray “wuu jeclaan lahaa inuu ka dheelo Serie A.”
Laacibkan 28-jirkan ee reer England ayaa ka werwersan in haddii aanu si joogto u dheelin ay taasi dhaafin karto Koobka Adduunka oo xagaaga soo aaddan la dheeli doono.
Wuxuu kaliya ciyaaraha haatan kasoo galaan qaybaha dambe dhanka Premier League, balse saas oo ay tahay wuxuu dhaliyay 4 gool isagoo dhigay 5 kale, 13 kulan oo rasmi ah.
“Waan ogahay inuu Theo jeclaan lahaa Serie A, waana ka baaraan degeynaa,” ayuu wakiil Warwick Horton u sheegay Tuttomercatoweb.
Warsidaha Corriere dello Sport ayaa qoraya inay laacibka xaaladdiisa eegayaan kooxaha ilan, Roma iyo Inter, halka dhanka England ay doonayaan West Ham United, Everton iyo Newcastle United, balse waxaa ugu macquulsan Southampton.
RASMI: Chelsea oo dhamaystirtay saxiixa Ross Barkley